October 5, 2017 na 1:05 obi
Ya mere oké nwere a ọhụrụ ntọhapụ!!
Ọtụtụ ndị na ekele
October 6, 2017 na 1:36 obi
Daalụ maka gị oké ọrụ.
October 7, 2017 na 1:13 obi
Dezie translation-adịghị arụ ọrụ m 🙁
Mgbe m na-eme edit translation m pịa nyochaa translation ma ọ dịghị ihe na-eme…
October 8, 2017 na 12:58 na
M ga-aguputa si anyị FAQ:
Apụghị m ịhụ translation interface mgbe ịpị akara ngosi na dezie page
Nke a na-dịcha mere a jQueryUI ogu, Biko lelee ọ bụla ọzọ na nsụgharị nke jQueryUI a gụnyere gị isiokwu ma ọ bụ ọzọ ngwa mgbakwunye,
I nwekwara ike ịgbalị na-eji jQueryUI akpagbu elu oke (1.8.24 bụ ezigbo nọmba)
January 14, 2018 na 11:18 obi
Olee otú i nwere ike gbanwee oke akpagbu jQueryUI?
June 16, 2018 na 11:58 na
Nke a oke nwere ike gbanwere na elu taabụ, ejikari na 1.8.24 nke nēche na-arụ ọrụ
November 7, 2017 na 8:33 obi
Bụ ihe a version php7 dakọtara?
November 9, 2017 na 6:45 obi
March 3, 2018 na 12:34 obi
bụ na ọ na-arụ ọrụ na PHP 5.6?
June 16, 2018 na 11:52 na
Yeison Gomez na-ekwu,
November 20, 2017 na 6:00 na
Ndewo! Daalụ fee uku a plugin.
Mgbe m na-agbalị idezi a translation m na-apụghị ịhụ de google ma ọ bụ Bing icon.
Ihe m na-eme ihe ọjọọ?
June 16, 2018 na 1:14 obi
Ọ bụrụ na ị na-ahụ na taabụ ma ọ bụghị ihe oyiyi, nke a pụrụ ịbụ n'ihi na nke adblocking. Ma ọ bụghị ya nwere ike ime ma ọ bụrụ na constants.php e gbanwere n'ime a na-abụghị ndị na-akwado asụsụ.
Gino Cote na-ekwu,
December 27, 2017 na 11:39 obi
Hi Transposh agbaji Ajax tinye na ụgbọ ibu button na Woocommerce.
m bụghị 100% n'aka ma i nwere a njehie bụ ndị yiri ka na-egbochi Ajax oku.
December 27, 2017 na 11:47 obi
Ndewo, loading Transposh ka n'okpuru fix ya.
January 12, 2018 na 11:15 na
a na-pụtara. M na-eji nke a plugin. M ga-agwa enyi m na facebook
June 16, 2018 na 12:03 obi
January 12, 2018 na 1:25 obi
Ma eleghị anya, na-agwa WordPress n'obi ọhụrụ version.
The ngwa mgbakwunye “Transposh WordPress Translation” egosi na a ga hapụrụ (emelitere 27 December 2014, anwale ka WP 4.1.21).
M nwere Version 0.9.9.2 arụnyere
June 16, 2018 na 11:59 na
Ị na-nnọọ ziri ezi, ofu a ugbu a.
January 20, 2018 na 7:45 na
Your plugin ọ bụ n'ezie mma, nke kacha mma i chọta, ma enweghị m ike ịghọta kpọmkwem ihe ị chọrọ.
Na Inye page : http://transposh.org/faq/donate/
ị na-ekwu na ị ga na-ego ma ọ bụrụ na anyị achọghị ka gị logo na wijetị na ị na-asị na ị na Aga :
“dochie upto 5% gị mgbasa ozi ohere na affiliation njikọ na ya Ntuziaka koodu”
Olee otú anyị pụrụ ịchịkwa na ?
Ị bụ onye hacker ?
Echere m, ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe n'eziokwu, ụzọ kasị mma bụ ime ka gị na plugin ok maka WordPress.org, mgbe ahụ, anyị nwere ike ịtụkwasị obi na ị na, na-anabata onyinye ma ọ bụ jụọ ego n'ihi na ihe nhọrọ.
Na ị ga-ahụ nọmba otu translation plugin!
June 16, 2018 na 11:57 na
Achọghị m ka m gị ego, ma m nwere ike mbanye anataghị ikike gị na saịtị na koodu nke bụ kpam kpam anya ka ị. Ọ bụrụ na ị na-ajụ m eziokwu, biko na-eji ihe ọzọ ngwọta. M nwekwara ike n'enweghị iche ị ga-inye onyinye a plugin mmepe, ma ọ bụ na-na ị na-eme atụmatụ na-eme nke a.
February 7, 2018 na 10:37 obi
Daalụ maka nke a plugin ! Anya ekwe na foto na vidiyo.
Site n'akụkụ m, ọ na-adịghị arụ ọrụ.
M n'ezie na-agbalị ya na a ule nkesa. WordPress reseted. otu nsogbu :
– Akpa, peeji nke na-abụghị sụgharịa, ọbụna mgbe mwube ha dee mgbe ebipụta ọzọ. M na-ahụ ọganihu mmanya ma ọ dịghị ihe na-eme. Ọ dịghị ihe a sụgharịrị na ihu njedebe mgbe ọ na-ekwu 20 peeji nke sụgharịa na dashboard.
– Mgbe, edit oyiyi mgbe na-egosi mgbe m tinye akara edit igbe. M na-agbalị ebe a na gị na website na ọ na-arụ ọrụ, nsogbu ekwesịghị m nchọgharị. Ma, m na ọ bụghị ya. Ọ dịghị ihe ọ bụla ihe oyiyi.
m na-eji :
* wordpress twentyfifteen isiokwu
* suiteplugins – elu xprofile ubi maka buddypress
* buddypress òtù naanị
Ihe ọ bụla echiche na ihe na-igbochi m Transposh ?
June 16, 2018 na 1:13 obi
Biko gbalịa ọhụrụ version. Ka anyị mara ebe ị kwụ.
Waseem Khan na-ekwu,
February 15, 2018 na 7:38 na
M mere niile nsụgharị site n'ihu-ọgwụgwụ nke m na saịtị na Arabic. Ugbu m na saịtị bụ naanị na English nke m sụgharịa ya abụọ version dị ka Arabic iji Transposh.
Ma njikọ bụ dị ka nke a:
Nkịtị English version: http://www.example.com
Achọrọ m ime ka ” /na ” version dị ka ndabere. N'ihi ya, m mere Arabic dị ka ndabere na Asụsụ ngalaba nke Transposh ma si n'ihu-ọgwụgwụ, ya na-enye m bekee version, bụghị arabic.
Ugbu a ihe m mere, bụ na, M mere a redirection na m na ngalaba “/na”. Nke a na-arụ ọrụ zuru okè ma mgbe na-eme nchọgharị site na dị iche iche na ngalaba nke m na saịtị site n'ihu-ọgwụgwụ, mgbe ụfọdụ njikọ na-akpaghị aka na-agbanwe azụ ka bekee version.
M eju anya ugbu a, nwere ike ị biko na-atụ aro m na-ezi ntọala maka nzube a ka naanị m sụgharịa version na-egosi na elu na n'ihu-ọgwụgwụ, Achọghị m ka m bekee version na niile.
June 16, 2018 na 1:12 obi
Ndabere asụsụ abụghị asụsụ saịtị ga-egosipụta na, ọ bụ asụsụ na ọtụtụ n'ime gị na saịtị ahụ si ọdịnaya e dere. Na-agbanwe agbanwe na nke a bụ adịghị ugbu a a feature anyị na-akwado.
February 28, 2018 na 2:28 na
Ọ mara oke mma.
Otú ọ dị – Whz ọ bụ free? Na-e Zoro Scripts? dị nnọọ na-arịọ?
June 16, 2018 na 11:54 na
Ọ dịghị ihe na-ezo, i nwere ike ịhụ ihe niile isi mmalite na trac.transposh.org
Abu Zafor na-ekwu,
March 26, 2018 na 7:27 obi
Olee otú m na-eme kpọmkwem post support kpọmkwem asụsụ ndị ọzọ karịa niile asụsụ ekemekde ke Transposh Language.
Ọzọkwa ọ ga-ewepụ a kpọmkwem asụsụ si otu post naanị, bụghị saịtị-n'obosara?
June 16, 2018 na 11:53 na
N'ebe a na oge, na e nweghị ndị dị otú ahụ mma
ngwá ụlọ na-echekwa na-ekwu,
April 13, 2018 na 11:07 na
Na-arụ ọrụ na PHP 5.3?
Ike 16, 2018 na 6:29 na
Mgbe m na-asụgharị m posts na Transposh, nsonaazụ ndị dị iche iche si na-asụgharị na Google Translate (M na-eji google ịsụgharị engine). Nke mgbe ụfọdụ na-akpata ihe ọjọọ nsụgharị. Ntak emi ẹwọrọde? Biko ị nwere ike inyere?
Transposh eziga nta agba ka Google, ma ọ bụrụ na ị chọrọ mma na ya pụta ị nwere ike ịgbanwe parsing iwu na elu taabụ. Ma nke a na-eme ka translation obere mgbanwe